Unogona here kufungidzira kuti iyo Apple Watch inokwanisa kuona Covid-19? | Ndinobva mac
Unogona here kufungidzira kuti iyo Apple Watch inokwanisa kuona Covid-19?
Zvakanaka, uyu mubvunzo mumwe chete urikubvunzwa kubva kuStanford University uye vari kuiongorora sezvatinoona zvichiratidzwa mune akasiyana midhiya. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti Apple Watch ine hunhu hwekutarisa pane hutano mune mazhinji emabasa ayo uye nekuwedzera iyo sarudzo yekuonekwa kwe Covidien-19 pasina mubvunzo chingave chinhu chakakosha chekutarisa munguva iyo yatinozviwana pedu patinoonekwa makiti anoonekwa nekusavapo kwavo.
Mupfungwa iyi data rehutano izvo zvavanoda paUniversity zvine hukama nedenda iri uye vanenge vachitsvaga vanhu vangangodaro vakabatira hutachiona, vane chokwadi chekuti vane hutachiwana, vanohuwana kana vari panjodzi kubva kubasa ravo kuti vabate chirwere ichi. Vanozvipira vanozoita akateedzana bvunzo uyezve mhedzisiro ichatora nguva yekuvaona, asi ivo vanozove vanofarira kurwisa kana kuti ndoda kuona chirwere.
Uye ndiko kugona kuita ma electrocardiograms eiyo Apple Watch Series 4 zvichienda mberi, akawedzera kune iyo "Kufema" kunyorera kunogona kuve kwakakura kwekutanga kwevanotsvaga kuStanford University. Mupfungwa iyi, vaongorori vari kutsvaga vanozvipira kuti vaite bvunzo dzinoenderana navo uye vatore mhedziso nezve mukana wekushandisa iyo Apple Watch kana chero basa rayo kuona chirwere ichi.
Ehezve, mareferenzi kana zviratidzo zvinokonzereswa neCovid-19 zvinogona kuve zvakasiyana uye kuratidza kune varwere munzira dzakasiyana uye izvi zvinogona kuve hurema hwakakosha mukuferefeta. Chero zvazvingava, mhedzisiro yeichi chidzidzo haingasvike makore mashoma, ivo vachangotanga, saka hatisi kuzofunga kuti chinhu chatinenge tiinacho munguva pfupi, kunyangwe chiri chokwadi kuti chingave zvinonakidza kuona mhedzisiro yemiyedzo uye kuona kana yedu Apple Watch ingadai iri kukwanisa kuona hutachiona uhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Unogona here kufungidzira kuti iyo Apple Watch inokwanisa kuona Covid-19?
Iwe unogona ikozvino kuwana iyo Spotify webhusaiti ine Safari
Kutumirwa kwePodPod kunonoka mune dzimwe nyika